ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ် မဖြစ် (DVB Debate - Women in Charge)
အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ် မဖြစ် (DVB Debate - Women in Charge)
DVB Debate - Women in Charge (part 2)
DVB Debate - Women in Charge (part 3)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 4:35 PM
မြန်မာပြည်ကသူတွေ ဒီလောက် ကျားမခွဲခြားတာ ၊
မရှိ ပါဘူး ၊
ဥပမာ ကွန်ပြူတာ expert တစ်ယောက် ၁ လ ၅သိန်း
နဲ.ခန်.ချင်တဲ.လုပ်ငန်း ရှင်က သူ view လို. မိန်းကလေး
ကတော်ရင် မိန်းကလေးဘဲခန်.မှာ ၊
အုတ်သယ် ကျောက်သယ် ပန်းရံလုပ်ငန်းကျတော့
မိန်းကလေးတွေမခန်.တာ၊ လုပ်ခပိုနည်းတာ မဆန်းပေဘူး။
ဝေးလံခေါင်ပါးတဲ. နယ်မြေဒေသတွေ ကိုအမျိုးသမီး ပေါက်စ ရော ၊ ရွတ်တွ ရော မသွားချင်
ကြလို. MC မှာ နိုင်ငံလိုအပ်ချက်အရ ယောကျားလေး
ကျားနဲ.မ ဟာ သူ.ဂွင်နဲ.သူပါ ။